Aferan-tany : Namoaka « avis de recherche » ny Bianco
Niteraka resabe tany anaty tambazotra sy facebook ny aferan-tany antsoina hoe « Tany Gasy ». Maro ireo olona milaza ho voasoloky tamin’ity famarotana tany manodidina an’Antananarivo ity no naneho ampahibe-maso ny halahelony. Tao ireo efa …Tohiny
Fanotofana ny Marais masay : Iza no minia tsy manaraka baiko sy lalàna
Taorian’ny fidinan’ny minisiteram-panjakana misahana ny tetikasan’ny Filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany, dia efa nivoaka ny naoty amin’ny tokony hanalana ireo ranontany nanotofana ny tetsy Marais Masay. Ankehitriny anefa tena hodian’ ireo mpanatanteraka baiko tsy …Tohiny
Ao anatin’ny fifanakalozana sy fiaraha-miasa amin’ny any ivelany. Mpanao asa tanana malagasy 13 mianadahy no hihazo an’i Inde ary hanatrika ny Foara iraisam-pirenan’i Inde, izay hotanterahina ny 2 ka hatramin’ny 18 febroary izao. Sehatra iray …Tohiny
Fampanantenan’ny Filoham-pirenena : Tafapetraka ny tranolay eny La Réunion kely
Tohin’ny asa fampanantenan’ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Hery, tamin’ny fandalovany teny La Réunion kely, mialohan’ny faran’ny taona 2017 teo, amin’ny hametrahana trano lay 100 isa hanoloana ireo trano sachets honenan’ireo mponina sy ho fitsinjovana azy ireo amin’izao …Tohiny